The mgbakọ na mwepụ gbakọọ ego nke bitcoin maka 2018 - Blockchain News
Price of Bitcoin maka 2018
on January 22, ọrụ Ọkara Joel Lopez Barata bipụtara a post: “M gbakọọ ego nke bitcoin n'afọ ahụ dum 2018. Ị ga-ekweghị n'ihi! “Na disclaimer” nke a bụ nnọọ echiche, abụghị onye na ego kansul. ” Lopez enweta mgbawa dabeere na amụma na omume nke bitcoin n'ọdịnihu ga-ederịta akwụkwọ ozi ka omume ya n'oge gara aga. N'okwu a, Lopez weere bitcoin “ike ego”, na Fiat – dịghị: “N'ọdịnihu uru ga-hà ikpeazụ, mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọta na bitcoin bụ ihe kasị mma ego.”
The Lopez ịme anwansị dabeere na Monte Carlo usoro. Nke a bụ a dịgasị iche iche nke mgbakọ algọridim na-adabere ugboro ugboro random samples. N'okwu a, Lopez-eji kwa ụbọchị dollar uru site bitcoin ịghọta ihe kpọmkwem price ga-abụ site na njedebe nke 2018.
Gbakọọ kwa uru, enye abahade ugbu bitcoin price site price maka ụbọchị ikpeazụ na subtracts na unit: “Na-ekwu okwu banyere Monte Carlo ịme anwansị na ego, anyị iche na ọdịnihu price omume nke akpan owo ga-abụ yiri ya n'oge gara aga agwa, na ike a ọtụtụ random nsụgharị nke a ga-eme n'ọdịnihu , nke a maara na mgbakọ na mwepụ dị ka “random n'ọnọdụ dị iche iche”. The zuru koodu maka eke ndị dị otú ahụ a ịme anwansị dị na GitHub.
Na-ewu ọ bụla random ije nlereanya ke ịme anwansị, otu ga-random samples of kwa uru site 2010 na taa, tinye ha na mgbe ba uba na-amụta n'ụlọ ruo December 31, 2018. Mgbe nke ahụ mechara, nke ugbu a price nke bitcoin na-uba site uru nke a random ije, na n'ihi bụ a ịme anwansị nke ga-eme n'ọdịnihu price. Nke a kwesịrị ime ọtụtụ ugboro (n'okwu a – 100,000 ugboro), na na na njedebe nke afọ na anyị ga-ahụ ikpeazụ price nkesa nke ọ bụla random ije.
Nke mbụ 200 nke 100,000 random n'ọnọdụ dị iche iche anya dị ka nke a:
Ọ na-enyo na ndị ikpeazụ price n'ihi na ọtụtụ random ejegharị àmà site $ 10,000 ka $ 100,000. Ndị na-esonụ esereese na-egosi na nkesa nke ikpeazụ ahịa niile 100,000 random n'ọnọdụ dị iche iche:
Ọ na-egosi na ihe na-price dịgasị n'etiti $ 24,000 na $ 90,000. Iji ghọta ya kpọmkwem, E nwere ọtụtụ ụzọ. First, ị pụrụ nanị gbakọọ 50% -nke percentile nke nkesa ikpeazụ ahịa. Ọ ga-hà $ 58,843. Ọzọ usoro bụ gbakọọ puru njupụta ọrụ na iji nuclear njupụta atụmatụ na-ahụ price kwekọrọ ekwekọ na kacha nke ọrụ a – $ 55,530.
Ma nke a abụghị nke ikpeazụ na-egosi, ọ bụ ka mma iji ya chọta obi ike nkeji. Maka bitcoin price, na 80% obi ike nkeji ga- $ 13,200 – $ 271,277. Ọ na-ekwu na Ohere na site na njedebe nke afọ na price ga-n'okpuru $ 13,200 bụ otu dị ka Ohere na ọ ga-abụ n'elu $ 271,277.
Ugbu a na nuclear njupụta atụmatụ mara, ọ bụ ike gbakọọ puru na-eri nke bitcoin ga-ada site na njedebe nke afọ ikwu a ụfọdụ egosi. Ọ kachasị, ihe gbasara nke puru na price ga-ala ma ọ bụ hara ka larịị nke January 20 ($ 12,000), bụ 9.84%.
Blockstream malite ...
Previous Post:Onye bu ihe agha agha e mere na Canadian kaadị Exchange